Madasha Xisbiyada oo ku eedeeyay Farmaajo Mas’uuliyad darro iyo Kali-talisnimo | Somalia News
Madasha Xisbiyada oo ku eedeeyay Farmaajo Mas’uuliyad darro iyo Kali-talisnimo
Qoraal ka soo baxay Madasha Xisbiyada Qaran ayaa si weyn loogu dhaliilay Madaxweyne Maxamed CabdulaahI Farmaajo inuu ku tuntay dastuurka dalka isla markaana curyaamiyay howlihii baarlamaanka.
Kulan ay isugu yimaadeen Madasha Xisbiyada ayaa qoraal laga soo saaray kulankaa kadib waxaa lagu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu abuuray jahawareer siyaasadeed iyo khilaaf dabadheeraaday.
“Madashu waxa ay u aragtaa mas’uuliyad darro iyo kaligii talisnimo in dalku uu xukuumad la’aado muddo 53 cisho ah,dowladnimadiina uu gacanta ku urursaday Madaxweynaha si uu dano shaqsi ugu fushado.”ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saartay Madasha.
Ugu dambeyntii Madasha ayaa kulankan ka soo saartay baaq ka kooban saddex qodob.
Halkan ka aqriso qoraalka ay soo saartay Madasha Xisbiyada Qaran;
Previous articlejournalist Khaled Drareni was sentenced to two years in prison on appeal
Next articleAxmed Qoorqoor “Waxaan lama huraan ah in Gobolka Banaadir matalaad ku yeesho Aqalka Sare”